Ithegi: ukuthengisa inkomfa | Martech Zone
Ithegi: ukuthengisa inkomfa
Iingcebiso ezingama-20 zokuQeqesha ukuHanjiswa kweTrafikhi efanelekileyo kwiNdawo yoRhwebo yoBonisa
NgoMgqibelo, Agasti 3, 2019 NgoMgqibelo, Agasti 3, 2019 Douglas Karr
Imiboniso yorhwebo inezinto ezicacileyo ezibenza babuyele kakhulu kutyalo-mali kwimiboniso yakho yentengiso. Abaphulaphuli yeyona nto ibalulekileyo, abo bezimase kunokwenzeka ukuba babe nohlahlo-lwabiwo mali, kwaye iinkampani zithumela abasebenzi bazo kuphando ngezigqibo zokuthenga. Leyo trifecta yezibonelelo. Ayizi ngaphandle kweendleko, nangona kunjalo. Ukuqeshisa indawo yomnquba yipremiyamu kwaye usebenzela ukufumana ukugcwala kwitente yakho ngumlo… phakathi kwakho kunye nezinye
Saturday, August 3, 2019 Saturday, August 3, 2019
Iimpawu zeMetrikhi eziPhambili siSigqeba ngasinye kufuneka silandelele
NgoLwesithathu, Matshi 6, 2019 NgoLwesithathu, Matshi 6, 2019 URavi Chalaka
Umthengisi onamava uyaziqonda izibonelelo ezivela kwimisitho. Ngokukodwa, kwisithuba se-B2B, iminyhadala ivelisa ngakumbi kunezinye iindlela zokuthengisa. Ngelishwa, uninzi lwezinto ezikhokelayo aluguquki luthengise, lushiye umceli mngeni kubathengisi ekufumaneni ezinye ii-KPIs ezongezelelweyo ukubonisa ubungqina bexabiso lotyalo-mali kwiminyhadala ezayo. Endaweni yokugxila ngokupheleleyo kwizikhokelo, abathengisi kufuneka baqwalasele iimetrikhi ezichaza ukuba isiganeko samkelwe njani ngabathengi abanokubakho, abathengi abakhoyo, abahlalutyi kunye